विदेशबाट फर्किँदा सुन ल्याउन पाउने नियममा परिवर्तन ! हेर्नुहोस् कति सुन ल्याउँदा कती कर ! – बिगुल न्यूज
काठमाडौँ – झिटिगुन्टा आदेशको व्यापक विरोध र सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले झिटिगुन्टा आदेशमा संशोधन गरेको छ। सरकारले झिटिगुन्टा आदेशमा संशोधन गर्दै सय ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस संशोधन सँगै विदेशबाट फर्किनेहरुले भन्सार तिरर अब सय ग्रामसम्म सुनका गहना भन्सार तिरेर ल्याउन पाउनेछन्। अब ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने छैन भने त्यसभन्दा माथि सय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर ल्याउन पाइनेछ।
यस भन्दा अगाडी झिटिगुन्टा आदेशले विदेशबाट फर्किँदा ५० ग्राम मात्र सुनका गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो भने सोभन्दा बढी सुनको गहना लिएर आए सिधै जफत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थाको व्यपाक विरोध र आलोचना भैरहेका बेला मुद्दा सर्बोच्चमा पुगेको थियो। सर्बोच्चले १०० ग्रामसम्म सुनको गहाना भन्सार तिरर ल्याउन पाउने गरी व्यवस्था गर्नु भन्दै सरकारलाई आदेश दिएपछि झिटिगुन्टा आदेशमा संशोधन गरिएको हो।
काँचो सुनमा लाग्ने कर यस्तो छ :
यस्तै विदेशमा काम गरेर फर्किने नेपाली कामदारले १०० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउँछन् । जसको लागि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। १ ग्राम देखि ५० ग्राम सम्म काँचो सुनमा प्रति १० ग्रामको ५२०० रुपिँयाको दरले कर लाग्छ । यसप्रकारले ५० ग्राम काँचो सुनको
५ं*५२००=२६००० रुपिँया कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी ५० ग्राम देखि १०० ग्राम सम्म काँचो सुनमा भने प्रति १० ग्रामको ६२०० रुपिँयाको दरले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यस अवस्थामा ५० ग्रामसम्म माथिको नियम लागू हुनेछ भने त्यस भन्दा माथि मात्र प्रति १० ग्रामको ६२०० रुपिँयाका दरले कर लाग्छ । जस्तै १०० ग्राम सुन ल्याएको खण्डमा ५० ग्रामको ५*५२००=२६००० र अर्को ५० ग्रामको ५*६२०० = ३१००० कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई जोड्दा कुल २६०००+३१००० = ५७००० रुपिँया कर हुन आउँछ । यो नियम काँचो सुनमा मात्र लागू हुन्छ । यसै गरि १०० ग्राम भन्दा बढी सुन ल्याउन खोजेमा भन्सारले जफत गर्ने समेत नियममा रहेको छ।
झिटिगुन्टा आदेशमा संशोधन पश्चात अब विदेशबाट आउँदा ५० ग्राम सम्म सुनका गहना कर नतिरी ल्याउन पाइनेछ। ५० ग्राम भन्दा बढी १०० ग्राम सम्म काँचो सुनकै दरले कर तिर्नुपर्नेछ। सय ग्रामभन्दा बढी अथवा ठूलो परिमाणमा सुनको गहना भन्सार कार्यालयले जफत गर्नेछ।